RFP360: Inotangisa Tekinoroji Kuti Ibvise Marwadzo Kunze kweRFPs | Martech Zone
Ndapedza basa rangu rese mukutengesa software uye kushambadzira. Ini ndakamisidzira kuunza inotungamira inotungamira, mhanyisa yekutengesa kutenderera, uye kuhwina madhiri - zvinoreva kuti ndakaisa mazana emaawa ehupenyu hwangu ndichifunga nezvazvo, kushanda nekupindura maRFPs - huipi hunodiwa kana zvasvika pakukunda bhizinesi idzva .
RFPs dzakagara dzichinzwa senge isingagumi kudzingirira mapepa - maitiro anononoka zvishoma nezvishoma izvo zvaida kuti zvivhime mhinduro kubva kutarisiko yechigadzirwa, kumhanyisa mhirizhonga nemutemo, kunetsa matambudziko neIT, nekusimbisa nhamba nemari. Avo vanoziva vanoziva - rondedzero inoenderera. Kushambadzira, kutengesa uye bhizinesi kusimudzira nyanzvi vanopedza maawa asingaverengeke zvisina tsarukano vachipepeta mhinduro dzakapfuura kumibvunzo inodzokororwa, kudzingirira mhinduro kumibvunzo mitsva, kuongorora ruzivo uye kutsvaga mvumo kasingaperi. Maitiro acho akaomarara, anotora nguva uye anonetsa pane zviwanikwa zvesangano.
Zvisinei nekukurumidza kushanduka kwetekinoroji, kumabhizinesi mazhinji, maitiro eRFP akachinja zvishoma kubva pane zvakaitika kwandiri pakutanga kwebasa rangu anopfuura makore gumi apfuura. Zvikwata zvekushambadzira zvichiri kushandisa manyorerwo maitiro kuisa pamwechete zvirevo, vachishandisa mhinduro dzakatorwa kubva kune chero nhamba yezvisimba zvinogona kugara muExpcel maspredishiti, akagovana maGoogle madhodhi uye kunyange email zvinyorwa.
Izvo zvakati, kwete chete isu isu tinoshuvira kuti dai chirongwa cheRFP chikave chinobudirira, iyo indasitiri iri kutanga kuida iyo, ndipo panomira software irikubuda kuti iite simba rakakura kunharaunda yeRFP.
Zvakanakira RFP Software
Kunze kwekugadzira kuvaka kweRFP kushoma kunorwadza; kumisikidza inokurumidza, inodzokororwa maitiro eiyo RFPs anogona kukanganisa zvakanyanya mari. Apa ndipo panobuda RFP tekinoroji inopinda.
RFP software inosimbisa uye inoisa mukati mibvunzo inowanzoitika uye mhinduro muraibhurari yezviri mukati. Mazhinji emhinduro idzi ane gore-based uye inotsigira chaiyo-nguva kubatana pakati pevane maneja vezvisarudzo, nyanzvi dzenyaya dzenyaya uye vanobvumidza vepamusoro-chikamu.
Zvikuru sei, RFP360 inogonesa vashandisi kukurumidza:
Sevha, tsvaga uye shandisa zvekare zvirimo neyakajairwa Ruzivo Base
Shanda nevashandi pamwe navo pane imwechete vhezheni yegwaro rimwe chete
Govera mibvunzo, tarisa kufambira mberi uye gadzirisa zviyeuchidzo
Shandura mhinduro neAI inoratidza mibvunzo uye inosarudza mhinduro kwayo
Tsvaga iyo Base Base uye shandira pane zvinongedzo muIzwi, Excel uye Chrome nema plug-ins.
Nekuda kweizvozvo, vashandisi ve RFP360Sarudzo yekugadzirisa manejimendi yakashuma kuti ivo vakakwanisa kudzikisa zvinoshamisa nguva dzekupindura, kuwedzera huwandu hweRFPs dzavanokwanisa kupedzisa uye, panguva imwechete, kunatsiridza yavo yese kuhwina mitengo.
Isu takapindura ku85 muzana mamwe maRFP gore rino kupfuura zvatakaita gore rapfuura, uye isu takawedzera kufambira mberi kwedu ne9 muzana.
Erica Clausen-Lee, mukuru wezano zano neInfoMart
Nemhinduro dzinokurumidza, iwe unenge uine mikana yakawanda kwazvo yekuendesa mhinduro dzisingachinjiki, dzakaringana uye dzinoshanda dzinogona kuhwina bhizinesi.
Wedzera RFP Kubatana
Vachishandisa chikuva cheZivo Yepuratifomu, vashandisi vanogona nyore kuchengeta, kuronga, kutsvaga uye kushandisa zvekare zvirevo zvekare, vachivapa kutanga musoro paRFP mhinduro. A centralized hub for proposal content inochengetedza timu yako kubva pakunyorazve mhinduro dziripo, ichikubvumidza iwe kutora data uye chengeta mhinduro dzakanakisa dzekushandisa mune ramangwana.
Isu tine chengetedzo yekuziva kwedu ruzivo rwakachengeteka uye rwunowirirana. Hatifanirwe kunetseka kuti isu ticharasikirwa nechero hunyanzvi hweSME kana mumwe munhu akarega kana kutora zororo. Hatisi kupedza maawa tichitsvaga mhinduro dzakapfuura uye kuyedza kufunga kuti ndiani arikuita nekuti mibvunzo yese nemhinduro zviripo muRFP360.
Beverly Blakely Jones kubva kuNational Geographic Kudzidza | Cengage Nyaya Yekudzidza
Kuvandudza RFP Kururamisa
Mhinduro dzisiri dzechinyakare kana yechinyakare dzinogona kuve dzinonetsa kubata, kunyangwe yenhengo yechikwata ine ruzivo. Kana ukabatanidzwa neinowanzoitika nekukurumidza-kutendeuka nguva yekupedzisira pane RFP, iyo njodzi yekupa yakakanganiswa ruzivo makomponi. Nehurombo, ruzivo rusiri rwechokwadi runogona zvakare kudhura zvakanyanya mukuti rinogona kukubhadharira iro rauri bhizinesi rauri kutsvaga kuita. Mhinduro isiriyo yeRFP inogona kukonzeresa kubviswa mukufungisisa, kutaurirana kwenguva refu, kunonoka pakubvumirana kana zvakanyanya.
Cloud-based RFP software inogadzirisa dambudziko iri nekubvumira zvikwata kuti zvigadzirise mhinduro dzazvo kubva chero kupi nguva chero nguva nechivimbo chekuziva shanduko inoratidzirwa sisitimu yakafara.
Semuenzaniso, mhando iyi yekushanda chishandiso chakakura kuve nacho kana chigadzirwa kana sevhisi ichiitika kakawanda inogadziridzwa inoda kuverengerwa mune yakajairwa mhinduro. Muzviitiko zvakawanda, vakatarisana nerudzi urwu rwekuchinja, zvikwata zvinofanirwa kumhanya kuburikidza nechati yese yesangano kuona kuti zvigadziriso zvinogamuchirwa munzvimbo uye vozoteedzana nenhengo yega yega kuona kuti yagadzirwa padanho remunhu mumwechete uyezve vachiongorora chikumbiro chega chega vasati Enda panze. Zvinonetesa.
Cloud-based RFP software inogadzirisa shanduko idzi kune bhizinesi rese uye inoshanda seyechete yekuchenesa imba yekushandura zvemukati.
Simbisa RFP Kubudirira
Kubatsira kukuru kweiyo RFP software ndeyekuti kukurumidza kushanda kunovandudzwa sei - nenzira yayo, iyo nguva inotora kuvaka RFP uchishandisa iyi mhando yehunyanzvi yakafanana nemusiyano uripo pakati pekutyaira pamhenderekedzo yegungwa kuenda kune gungwa uye kubhururuka. Mazhinji RFP software mhinduro, kusanganisira RFP360, zvakare ane makore-akavakirwa, ayo anotendera kukurumidza kutumirwa, zvichireva kuti mhedzisiro yacho ingangoita ipapo ipapo.
Nguva yekukoshesa (TtV) ndiyo pfungwa yekuti pane wachi inoteedzera kuti zvinotora nguva yakareba sei mutengi kubva pachibvumirano chakasaina kuenda kune 'ah-ha nguva' pavanonyatsonzwisisa kukosha uye nekuvhura kugona kwesoftware. Zve RFP software, ino nguva inowanzoitika mavhiki mashoma chibvumirano chasainwa apo mushandisi ari kushanda pamwe neyakagadziriswa timu yevatengi pane yavo yekutanga RFP. Mhinduro dzakajairwa uye chekutanga chikumbiro chinoiswa pasystem, ipapo ah-ha nguva - software inoziva mibvunzo uye inoisa mhinduro dzakaringana, ichipedzisa paavhareji kutenderedza 60 kusvika 70 muzana yeRFP - munguva pfupi.
Isu takaona kuti RFP360's interface yaive inonzwisisika uye nyore kumuka nekumhanya. Pakave neakave mashoma kudzidza kodhi kwatiri, uye zvakabvumidza kuita kwedu kuwedzera padhuze ipapo.
Emily Tippins, Sales Administrator weSwish Kugadziriswa | Nyaya Yekudzidza
Iko kushanduka kweiyo RFP maitiro kunopa vashandisi nguva yekudzoka kuti vatarise kune epamusoro-chikamu, matanho ehurongwa.
Izvo chaizvo zvakaita kuti isu tiwedzere kushanda. RFP360 yatidzosera nguva yedu uye yakatibvumidza isu kunyatsosarudza uye sarudza mapurojekiti edu. Hatisisina kupenga futi. Tinogona kutora mweya wekufema, tarisa pakuita zvine hungwaru uye kuona kuti tiri kusarudza zvakanaka mapurojekiti uye nekupa mhinduro dzemhando yepamusoro.
Brandon Fyffe, bhizinesi rekuvandudza mubatanidzwa kuCareHere
RFP Technology Inofanirwa-Haves
Bhizinesi kupfuura RFPs - Mhinduro software haisi yeRFPs chete, unogona zvakare kugadzirisa zvikumbiro zveruzivo (RFIs), chengetedzo uye nekushingairira mibvunzo (DDQs), zvikumbiro zvedzidzo (RFQs) nezvimwe. Iyo tekinoroji inogona kushandiswa kune chero mhando yemhando yemibvunzo uye mhinduro fomu ine mhinduro dzinodzokororwa.
Yakanakisa-mu-kirasi usability uye rutsigiro - Haasi munhu wese anoshanda paRFPs anonyanya kushandisa mushandisi. RFPs dzinoda kuiswa kubva kumadhipatimendi mazhinji uye nyanzvi dzenyaya dzenyaya dzine huwandu hwakasiyana hwehunyanzvi hwehunyanzvi. Sarudza mhinduro iri nyore kushandisa uye intuitive ine yakanakisa rutsigiro rwevatengi.
Chiitiko uye kugadzikana - Sezvakaita chero SaaS tekinoroji mupi, iwe unogona kutarisira kugara uchigadzirisa uye zvigadziriso kubva kune yako RFP tekinoroji, asi ita shuwa kuti kambani ine ruzivo rwekuburitsa zvechokwadi zvinobatsira maficha aunogona kuvimba nawo.
Knowledge Base - Yese mhinduro yeRFP inofanirwa kusanganisira yekutsvaga yezvinhu zvemukati inobvumira vashandisi vako kuti vashande pamwe nekupa zvigadziriso kumhinduro dzavakapihwa. Tarisa mhinduro inogadzirisa AI kuenzanisa mibvunzo yakajairika kune avo mhinduro.
Akangwara plug-ins uye kusanganisa - RFP tekinoroji inofanirwa kushanda nezvirongwa zvaunoshandisa. Tarisa plug-ins iyo inokutendera iwe kushandisa yako ruzivo base paunenge uchishandira pane yako mhinduro muzvirongwa seIzwi kana Excel. Iyo software inofanirwa zvakare kusanganisa neakakosha CRM uye neyakagadzirwa manyorerwo kuti musone kutsigira yako RFP iripo maitiro.
Kutambisa Nguva Shoma Uye Kuhwina Zvimwe RFP
RFPs ndezvekukunda. Izvo zvakagadzirirwa kubatsira mutengi kusarudza kuti ndiani akanakisa, uye nekukurumidza iwe unogona kuratidza kuti bhizinesi rako rinokwana bhiri, zvirinani. RFP software inomhanyisa maitiro ako kuti uwane mukutarisisa nekukurumidza, vhara bhizinesi rakawanda uye inokupa iwe yakawanda mikana yekukunda.
Sezvo zvikwata zvekushambadzira zvinowirirana zvakanyanya uye kubatana pamwe nekushanda kwemari, RFP tekinoroji inova inonyanya kukosha pakuita. Iko kudiwa kwekukurumidza RFP mhinduro hakusi kuenda. Saka usamirira kusvikira iwe usisakwanise kuitora zvakare kuti utore tech inokuchengetedza nguva pane yako RFPs. Vakwikwidzi vako zvirokwazvo havadaro.
Kumbira RFP360 Demo
Tags: chikumbiro chekutsvagarfprfp chikuvarfp360swish rechengetedzonguva yekukoshesattv